Refugee resettlement in America | Macluumaad & resources from USAHello | USAHello
Qaxootiga dib u dejinta ee dalka Mareykanka of America
Sidee u dejinta ee shaqada America? Maxaa dhacaya marka aad tahay qaxooti ah ee USA? Baro yimid qaxootinimo ee USA iyo aad u hesho warbixin kaa caawin doonaan inaad fahamto oo ku saabsan nolosha Ameerika.
Imaanshaha ee dalka Mareykanka
Marka ugu horaysa ee aad timaado ee dalka Mareykanka, aad u badan tahay in la salaamay doonaa garoonka by iskaa wax ka hay'addaada dib u dejinta. Waxay qaadanaysaa in aad gurigaaga cusub. Ururka ayaa sheegay in uu idin caawiyo leeyahay oo kaliya qadar yar oo ah lacag si aad u hesho meel ay ku noolaadaan. Sidaas gurigaaga laga yaabo in guri yar. Waxaa laga yaabaa in ay leeyihiin kaliya wax yar oo ku jira. qoysaska American badan tahay deeqay agabka qoyska, sida sariirta iyo miiska, waayo, guri.
Waxaad haysan doontaa in ay bartaan sida loo isticmaalo waxyaabaha cusub ee aad guriga - tusaale ahaan, aad qaboojiyaha, microwave iyo dhaqashada mashiinka. Your hay'adda dejinta iskaa wax u qabso ku tusi doona sida. Waxaad ka heli doontaa cunto ka duwan, laakiin aad awoodid bartaan oo ku saabsan cuntada iyo cunidda ee USA.
Ka dib markii aad timaado, waxaa laguu qorayaa shaqaalaha kiiskaaga. Qofkan kaa caawin doona inaad la qabsato USA. Shaqaalaha kiiskaaga ayaa noqon doona mid aad u mashquul caawinta qoysaska kale, aad. Shaqaalaha kiiskaaga waa in ay raacaan xeerarka badan ee dib u dejinta qaxootiga. Waxaa muhiim ah si ay u ilaaliyaan xiriir fiican la leeyahay shaqaalaha kiiskaaga.
Waxaad heli doontaa inaad buuxiso badan oo waraaqaha. waraaqaha Tani waxaa loo baahan yahay si aad u hesho lacag. Iyada oo ku xidhan waxa gobolka aad ku nooshahay, waxaad heli doontaa xaddi yar oo lacag ah qoyskaaga. Tani waxaa laga yaabaa in loo yaqaan Assistance Refugee Cash ama waxa lagu magacaabo Gargaarka Ku Meel Gaarka ah ee Qoysaska Baahan. laga yaabaa in aad sidoo kale ka heli doontaa wax loo yaqaan "Gargaarka Cuntada" ama SNAP. Tani waa in lagu bixiyo raashinka. Waxa aad war dheeraad ah oo ku saabsan baran kartaa gargaarka aad hesho laga yaabaa in iyo sidoo kale manfacyada dadweynaha gaar ahaan dadka qaxootiga ah.
baadhitaano caafimaad oo
Qof kasta ee qoyskaaga ka yeelan doonaan si ay u helaan baadhitaan caafimaad. Waxaa dhici karta inaad lahaa baaritaan caafimaad ka hor inta aadan u yimaadeen inay u America. Adiga iyo caruurtaada laga yaabaa in si aad u hesho tallaalada si looga hortago inaad hesho cudurada. Waxaad badan oo ku saabsan baran kartaa daryeelka caafimaadka ee USA. Haddii aad qabto dhibaato caafimaad, waa in aad aragto dhakhtar inta lagu guda jiro sideed bilood ee ugu horreysa aad ku sugan tahay USA, maxaa yeelay, aad leedahay caymis caafimaad oo wanaagsan.
Aad carruurtaada ku qorayso dugsiga
Haddii aad leedahay carruur, waa in aad iyaga ugu qorto dugsiga. Waxaad ka akhrisan kartaa this page on dugsiyada dadweynaha in badan oo ku saabsan dugsiyada Maraykanka bartaan. Gobolada intooda badan waxay u baahan yihiin carruur da ' 5 in 18 inay dhigtaan dugsi.
laga yaabaa in aad rabto in aad, ama u baahan, u soo dirto carruurta ka yar xannaanada. Waxaa kaloo jira barnaamijyo lacag la'aan ah lagu magacaabo Headstart iyo Headstart hore ee caruurta aadka u yar ee dugsiga.
Your hay'adda iyo maamulaha kayska dejinta kaa caawin doona inaad shaqo hesho. Qaxooti ahaan, waxaad bilaabi kartaa shaqeeya isla markiiba by muujinaya stamp soo galo on baasaboorkaaga. Ujeeddada barnaamijka dib u dejinta Maraykanka waa "isku-filnaanshaha." Taas macnaheedu waa dawladdu rabto inaad shaqo si aad u hesho sida ugu dhakhsaha badan ee aad awoodid. laga yaabaa in lagaaga baahan doonaa inaad qaadato shaqada ugu horeysa aad waxaa la bixiyaa. ma laga yaabaa in aad rabtid in aad shaqo this. Waxaa muhiim ah in la xasuusto in aad ka ogaan kartaa shaqo raadinta wanaagsan. Waad awoodaa dheeraad ah oo ku saabsan ku bartaan shaqo raadinta ama shaqo fiican.
Qaadashada Lambarka Bulshada
Waxa kale oo aad leedahay si aad u codsato a Lambarka Amniga Bulshada. Shaqaalaha kiiskaaga ayaa laga yaabaa in kaa caawin doona inaad taas samayn. Tani waa tiro ka mid ah in uu muujiyo in aad ku noolaan karaan ee USA. Marka aad ka shaqayso, qaar ka mid ah lacagta waxaa laga soo jeegaaga sida canshuuraha iyo qaar ka mid ah ammaanka bulshada.
Baro sida in la wado
Waxaad u baahan doontaa in ay bartaan sida loo qaato baska ama sida in la wado. In Maraykanka, waa in aad gudubto imtixaanka iyo kasban liisanka darawalnimada si ay u eryi. Waxaad sidoo kale waa inay bixiyaan baabuurkaaga, caymiska gaarigaaga, iyo kharashka dayactirka.
Waa arrin aad u muhiim ah in aad diiradda saaraan barashada Ingiriisiga. Tani waa waxa ugu muhiimsan ee aad samayn karto si ay u caawiyaan qoyskaaga guulaystaan. hay'adda dib u dejinta ay u badantahay in aad saxiixdo doonaa fasallada Ingiriisiga. Waxaad kaloo qaadan kartaa fasallada Ingiriisiga online ama aan ka helo fasalo meelaha kale ee bulshada. Waxaa kaloo muhiim ah in ay isku dayaan si ay u caawiyaan caruurta aad u bartaan afka hooyo.
Dheellitir hiddaha Maraykanka
Inta lagu jiro oo dhan of this time, waxa kale oo aad baran doontaa in ay la qabsadaan si dhaqanka American. Waxaad la kulmi karaan naxdinta dhaqameed. Waxaa muhiim ah in aad in aad xasuusato dhaqanka yahay mid qiimo leh oo aad farabadan oo hantida kula Maraykanka. Waxaad ku caawin kartaa baro Americans ku saabsan dhaqanka.
Ka dib markii muddo hal sano ah, aad u hesho kaarka cagaaran
Hal sano ka dib markii aad timid Mareykanka, waxaad codsan kartaa deganaansho joogto ah (a kaadhka cagaaran). Shaqaalaha kiiskaaga ayaa laga yaabaa in kaa caawin doona inaad codsato.
Ka dib markii sannaddii kowaad, aad u badan tahay in ay joojiyaan wax arkee shaqaalaha kiiskaaga. Laakiin, wali waxaa jira in badan oo ururrada kale iyo dadka kaa caawin kara in Maraykanka. Haddii aad u baahan tahay caawimaad helitaanka barnaamijyada ee bulshada, waxaad ka raadin kartaa in FindHello si aad u hesho khayraadka iyo adeegyada aad u dhow.
U soo guurista magaalo cusub
Mararka qaarkood, qaxootiga go'aan iyagu ma ay jeclaan magaalada ay dib u dejin iyo waxa ay doonayaan in ay u guuraan magaalada cusub. Inkasta oo ay jiraan wuxuu noqon karaa faa'iidooyinka ay u haddii aad u dhaw guuri kartaa si qoyska ama saaxiib ama meel shaqo wanaagsan, waxa kale oo uu noqon karaa mid aad u adag. Waxaa muhiim ah in la ogaado in marka aad u guurto, aad leedahay si aad u codsato in gargaarkaaga. Haddii aad ku fekereyso in uu u dhaqaaqo meel cusub, fadlan akhri this page on u dhaqaaqo magaalada cusub ka hor intaadan guurin.
Dhameysan dugsiga sare iyo kasban GED a shahaadada
Ka dib markii sanadkii koowaad, si ay shaqo fiican ka heli, Waxa kale oo laga yaabaa in aad u baahan tahay inay ku dhameystaan ​​waxbarashada, gaar ahaan haddii aad ma uusan dhammayn dugsiga sare ee dalka. Waxaan leenahay fasal free online si ay uga caawiyaan in aad kasban aad shahaadada dugsiga sare. Waxa kale oo aad wax dheeraad ah oo ku saabsan baran kartaa kulliyad iyo fursado kale oo waxbarasho ee USA.
USA keena Ehelkiinna
Waxa kale oo laga yaabaa in aad rabto in aad dalbato in loo keeno xubnaha kale ee qoyska si USA. Guud, aad u baahan tahay si aad u dalbato inaad tan samaysaan labada sano ee ugu horeeya gudahood waxaad u timid inaad USA. Read ku saabsan isu keenida qoyska ama la hadal shaqaalaha kiiskaaga ku saabsan.
Macluumaadka on this page ka timaadaa UNHCR oo kale ku kalsoon tahay ilaha. Waxaa loogu talagalay hanuun iyo waa la cusboonaysiiyaa inta badan ee suurtogalka. USAHello ma siiyo talo sharci ah, mana ka mid ah waxyaabaha aannu loogu tala galay in la qaado, sida la-talin sharci. Haddii aad raadineyso qareen lacag la'aan ah ama qiime jaban ah ama caawimaad sharci, waxaan kaa caawin karnaa hesho adeegyada sharci oo bilaash ah iyo qiimo-yar.